Wasiirka Arrimaha Dibadda oo kulan la yeeshay Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya (SAWIRRO) – Xogbaahiye Online
Xog Sugan & Warar Deg Deg ah
[ September 30, 2018 ] Xog: Al-Shabab oo xoog ku kaxeyastay 300 oo caruur iyo 2,500 oo kale oo xiga	Wararka Maanta
[ April 12, 2018 ] DEG DEG + SAWIRRO: Guddoomiye Jawaari oo si rasmi ah ugu dhawaaqay Is-casilaadiisa, Sheegayna in…	News Engalish
[ April 12, 2018 ] UK minister lauds AMISOM for its role in securing Somalia	News Engalish
[ April 12, 2018 ] C/rashiid Xidig “Kama mid ihi dadka u tartamaya kursiga uu baneeyay Jawaari”	Wararka Maanta
[ April 12, 2018 ] DEG DEG: Cabdiweli Muudey oo la wareegay Guddoonka Fadhiga Baarlamaanka iyo Jawaari oo…	Wararka Maanta
HomeWararka MaantaWasiirka Arrimaha Dibadda oo kulan la yeeshay Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya (SAWIRRO)
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo kulan la yeeshay Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya (SAWIRRO)
April 11, 2018 admin Wararka Maanta 0
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya Amb. Ahmed Issa Awad, ayaa qaabilay Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya Mr. Carlo Campanile, isaga oo ka guddoomay dhambaal casuumaad ah.
Intii kulanka lagu guda jiray waxaa looga hadlay xiriirka laba geesoodka iyo iskaashiga, iyadoo loo marayo istraatijiyad siyaasadeed, nabadgelyo iyo dhaqaale si loo xoojiyo maqaamka xiriirka taariikheed ee labada dal iyo labada shacab ee saaxiibada ah, waxaa sidoo kale laga dooday arrimo dhowr ah oo ku qotoma xiriirka iyo sidoo kale xaaladda gobolka iyo dunida inteeda kale.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cawad ayaa siiyay Safiirka Talyaaniga ee dalkan warbixin dhameystiran oo ku saabsan xaalada Guud ee dalka, Waxa uu amaanay doorka Talyaaniga ee horumarinta Kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo ka qeyb qaadashada dhismaha Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Carlo Campanile, ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay Hardanka Dowladda Dhexe ay ugu jirto sidii ay usoo ceshan leheyd Maqaamkii ay ku leheyd dunida inteeda kale.
Gen. Gorod oo dalbaday in la fasaxo lacagtii lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha
AKHRISO: Warmurtiyeed laga soo saaray Shirkii ka socday Dhuusamareeb